Abuurista Macluumaadka: Ku Gaadhida Millennials-ka iyadoo Qaab Macluumaad Loo Wado | Martech Zone
Abuurista Macluumaadka: Gaaritaanka Millennials-ka iyadoo loo marayo Qaab Macluumaad-wadista ah
Isniin, November 28, 2016 John Manganaro
Sida laga soo xigtay a sahan dhowaan uu sameeyay Zillow, millennials waxay waqti badan ku qaataan cilmi baarista, ka adeegashada hareeraha ikhtiyaarka ugu fiican iyo isbarbar dhiga qiimaha kahor intaadan iibsan. In kasta oo xilligan cusub ee macaamiisha aadka loo wargaliyay ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo loogu talagalay shirkadaha iyo shirkadaha, waxay sidoo kale bixisaa fursad dahabi ah. In kasta oo suuqleyda badani ay u wareejiyeen isku darka suuqgeynta si ay diiradda u saaraan howlaha dijitaalka ah, haddana waxaa si isku mid ah muhiim u ah in laga faa'iideysto isla halbeegga xogta ee millennials-yada maanta ay adeegsanayaan.
Adeegsiga horumarkii ugu dambeeyay ee cilmi baarista iyo teknolojiyadda xogta looma baahna inay ku ekaato dhinaca macaamilka. Shirkadaha waxay kula dagaallami karaan xogta xogta si ay sifiican ugu fahmaan bartilmaameedyadooda bartilmaameed. Ayadoo la ogyahay sida millennials-ku ay u marayaan habka cilmi baarista, iyo noocyada macluumaadka ay cunayaan, suuqleydu waxay la jaan qaadi karaan si waafaqsan si ay uga codsadaan tirakoobkan tirada badan ee muhiimka ah.
Sii waxa ay rabaan
Ka fikir waxa ka dhigaya goobta sida Amazon oo kale inay adag tahay - waxay baranaysaa iibsadaha waxayna samayn kartaa talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay iibsadaha. Mana jirto sabab ay meheraddaadu ugu dhex gali karin xogta noocan ah Analytics, xitaa haddii aad maamusho hawl leben-iyo-hoobiye ah.
Tusaale ahaan, waxaan soo saarnay algorithm leh ku dhowaad 1,000 doorsoomayaal ka caawiya ganacsatada baabuurta inay fahmaan noocyada gawaarida ee ay u badan tahay inay iibsadaan macaamiishoodu. Tani waxay tixgelinaysaa arrimo ay ka mid yihiin dhaqankii wax iibsi ee hore, noocyada caanka ku ah suuqaas juqraafiyeed, falanqaynta tartanka iyo waxyaabo kale oo badan. Qaabkaas, ka dib cilmi-baaris kun sano ah ka dib nooca gaariga uu isagu ama iyadu doonayo, waxaan hubineynaa in gaadhigani ku yaal qaybta ganacsadaha si ay ugu diyaar garoobaan inay sameeyaan iibka marka kunku u muuqdo.
Millennials ma booqanayaan gawaari fara badan si ay ujeeddo la'aan ugu dhex wareegaan; waxay ku qabtaan qaybtaas khadka tooska ah. Way qarash gareeyaan saacadood 17 uga adeegashada internetka baabuur kahor iibsiga. Casriga maanta, waa ganacsadaha ganacsigiisu inuu hubiyo in inbadan loo qoondeeyay dhadhanka milleniyaal. Millennials waxay ku hubaysan yihiin xog; waxaad u baahan tahay inaad ku hubaysato sida ugu badan ee xog ah (haddii aysan kaba badnayn!) Si aad ugu diyaar garowdo iyaga. Hal dariiqo oo sahlan oo tan lagu sameeyo ayaa ah adoo eegaya xogta iibka taariikheed, iyo cidda aad wax u iibineyso. Ma waxaad u beddeleysaa iibsadayaasha kun-sano jirka ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay badeecooyinka ama adeegyada ay u janjeeraan? Adiga oo ka faa'iideysanaya macluumaadkan, waxaad qaabeyn kartaa badeecadaada ugu fiican isla markaana kordhin kartaa iibka mustaqbalka.
Dib u eegis ku samee Faallooyinka
Dareenka yaabka leh ee 81 boqolkiiba 18-34 sano jirka ah ayaa raadsada fikradaha dadka kale ka hor intaadan iibsan, sida laga soo xigtay cilmi baaris ka socota Mintel. In kasta oo milkiile ganacsi laga yaabo inuu ku cago jugleeyo fekerka fikradaha diidmada ah ee dadweynaha, haddana dib u eegista khadka tooska ah waxay bixiyaan fursad lagu helo jawaab celin la'aan, jawaab celin daacad ah oo ku saabsan waxa ay macaamiishaadu ka qabaan khibradooda. Macdanta dib u eegista ku samee goobaha sida Yelp, Edmunds, TripAdvisor, Cars.com, Angie's List (wax kasta oo macno u leh meheraddaada) lana shaqee kooxdaada si aad u xalliso meelaha ay khusayso.
Laakiin kaliya diirada saar dib u eegista xun. Dib u eegista wanaagsan waxay dhab ahaan noqon kartaa xog badan, maxaa yeelay waxay sharaxayaan aragtida astaantaada iyo sumcaddaada. Ma lagu yaqaanaa adeeg macmiil oo heer sare ah? Qiimo dhimis weyn? Xullo ballaadhan? Markaan la shaqeyno ganacsatada gawaarida, waxaan cadeynnaa waxa ay ku xoogan yihiin, waxaanan kala shaqeynaa iyaga sidii loo qaabeyn lahaa suuqgooda iyo ganacsiyadooda si waafaqsan. Tusaale ahaan, haddii macaamiisha ay jecel yihiin qiimayaashooda, waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay xayaysiiyaan noocaas ah BMW.
Qiimee Khibradda Mobilada
Kaliya inaad kun sano u gasho dukaankaaga kuma filna mar dambe, maxaa yeelay waayo-aragnimada moobiilka ayaa hadda door ka ciyaareysa dhaqanka iibsiga dukaanka. 57 boqolkiiba millennials u istcimaalaan taleefannadooda isbarbar dhiga qiimaha inta aad ku jirto dukaanka. Haddii aad haysato shey indhahoodu qabteen, iyo iibiye waxtar leh oo ka jawaabaya su'aalahooda, weli waad waayi kartaa iibka haddii macmiilku Googles kula tartamo adiga oo maraya waddada oo uu helayo qiimo ka hooseeya. Waxay sidoo kale baranayaan macluumaad tayo leh - tusaale ahaan, haddii ganacsade baabuur uu sii wado oo uu ku saabsan yahay sida gaariga loo aamini karo, laakiin markaa macmiilku wuxuu akhriyaa dhammaan dib u eegista ku saabsan gaariga burburay, waxay yeelan doonaan su'aalo.
Warka wanaagsan ee halkan ku jira ayaa ah in khibradda moobiilku ay u adeegsan karto qaab xog ah kooxdaada. Samee qaar ka mid ah khibradaha dukaamaysiga oo jeesjees ah kana fikir waxyaabaha laga yaabo in qof uu ka eegi karo taleefankiisa. Waxyaabo qaas ah oo ku yaal dukaankaaga, tartamayaasha maxalliga ah, dib u eegista, iwm. Waxaad baran kartaa in tartame uu muujinayo xayeysiis qiimo dhimis ah mar kasta oo qof raadinayo badeecad caan ah oo adigu leedahay. Ama waxaa laga yaabaa in websaydhkaagu aanu soo muuqan markii qof raadinayo sheygaas, taas oo muujinaysa inaad yeelan karto xoogaa shaqo SEO ah oo aad qabato.
Laakiin kani maahan ciyaar ciyaar difaac ah - waxay kaloo daaha ka qaadi kartaa fursado. Tusaale ahaan, waxaan ka caawinnay wada-hawlgalayaashayada ganacsadaha inay aqoonsadaan dhacdooyin aysan tartamayaashoodu samaynaynin suuq-geyn shaqo weyn samaynta ama moodeel gaar ah. Tani waxay ku dhiiri gelineysaa ganacsadeyaasheena inay keydiyaan moodeelkaas, laga yaabee inay ku helaan qiimo ka fiican ama tayo ahaan, ayna abuuraan dakhli badan
Xogtu waa Meelkasta. Adeegso.
Kacaanka dijitaalka ah kaliya ma ahan inuu bilaabo bogga Facebook ama uu socodsiinayo qaar ka mid ah xayeysiinta raadinta. Tusaalooyinka kor ku xusan waxay u taagan yihiin dhowr siyaabood oo aad ugu dhex gasho macluumaadka qadka, iyo khibradda isticmaale, si aad si fiican ugu fahanto macmiilkaaga. Adiga oo ka fiirinaya Websaydhka macaamiishaada indhahooda, waxaad ka helaysaa dareen ah wax kasta oo ay arkayaan inta lagu jiro hawsha wax iibsiga, taas oo kuu oggolaanaysa inaad la jaanqaadi kartid si aad ugu guuleysato ganacsigooda.
Tags: baabuur badanbaabuurxogta la hirgaliyokacaanka wareegafeeraha dahabka ahMillennialmillennialsmintelwaayo-aragnimo wareegadib u eegista xundhaqanka iibsigaReviewszillow
John Manganaro waa VP of Product & Analytics oo loogu talagalay MADOW, halkaas oo uu mas'uul ka yahay hal-abuurnimada wax soo saarka iyo falanqaynta xogta, oo diiradda lagu saaray ka caawinta ganacsatada inay maareeyaan alaabada baabuurka ay isticmaaleen si wax ku ool ah. Markii hore, Manganaro wuxuu ahaa La-Taliyaha Maamulka ee PwC iyo milkiilaha wax soo saarka ee ururada tiknoolajiyada, oo ay ku jiraan Cars.com.
In kasta oo Maxay Suuqayaal yihiin, Suuq geyntu waa Shaqo adag
Google Waxay Tayaysaa Bilaabista Suuqayaal Tijaabinta